Imozulu yaseColombia | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | | Kholambiya
Enye yezinto ezothusa abahambi abatyelele iColombia okokuqala kukufana kwemozulu yayo unyaka wonke. Isizathu kukuba ilizwe likummandla weikhweyitha, ke amaxesha onyaka akanamava njengakwizizwe ezininzi zehlabathi kwaye iiyure apho ilanga liphuma okanye liwile azitshintshi.
IColombia lilizwe elinokwahluka okukhulu ngokwemozulu, ukusuka kumaqondo obushushu aqandayo ukuya kwimozulu yetropiki. Inamaxesha amabini aphambili: eyomileyo (ukusuka ngoDisemba ukuya kuJanuwari kunye nokusukela kuJulayi ukuya kuAgasti) kunye emanzi (ukusuka ngo-Epreli ukuya kuMeyi nango-Okthobha ukuya kuNovemba). Kodwa oku ngasentla akuthethi ukuba imozulu yaseColombia iyafana. Ngapha koko, olona luhlu lubalaseleyo lwendawo linika ilizwe ubuninzi bemihlaba, imigangatho ye-thermal kunye ne-biodiversity.
Ngokuchanekileyo, enkosi kolu luhlu, abahambi banethuba lokukhetha elona xesha lilungileyo lokutyelela iColombia ngokuxhomekeke ekubeni bakhetha ukushushu okanye ukubanda. Ukucaca malunga nokuba uza kuya nini kwilizwe, kungcono ukufumanisa malunga namaqondo obushushu onokudibana nawo ukuze ulungele nayiphi na imeko.
1 Zithini iimeko zezulu zaseColombia?
2 Leliphi elona xesha lilungileyo lokuya eColombia?
Zithini iimeko zezulu zaseColombia?
Imozulu ezishushu: Kwiindawo ezinemozulu, ubushushu budlula i-24 ° C, njengoko kusenzeka ePacific (apho ungabukela khona iminenga) kunxweme lweCaribbean (apho iTark National National Park ikhoyo kwaye apho ikharityhulam edumileyo yaseBarranquilla) kunye I-San Andrés (indawo ekuyiwa kuyo kunye neelwandle ezintle zokuntywila kunye nokwenza eminye imidlalo yezamanzi).
Imozulu eziphakathi: Amaqondo obushushu aphakathi kwe-17 ° C kunye ne-24 ° C kwiindawo ezinje ngeCali (ikhaya lomboniso odumileyo waseCali) naseMedellín (apho kwenzeka khona iFlower Fair).
Imozulu ezibandayoKwiindawo ezinolu hlobo lwemozulu, amaqondo obushushu aphakathi kwe-12 ° C kunye ne-17 ° C. Injalo imeko yaseBogotá, ikomkhulu laseColombia. Isixeko esidibanisa isithethe kunye nobugcisa obaziwa njengeAthene yoMzantsi Merika. Utyelelo olubalulekileyo ekufuneka lwenziwe eBogotá yiMyuziyam yaseGolide, kubalulekile ukuba ufunde malunga nenkcubeko yamandulo yangaphambi kweSpanishi okanye ibali elidumileyo likaEl Dorado.
Sayeka: Kwezi ndawo, amaqondo obushushu aphakathi kwe-6 ° C kunye ne-12 ° C. Injalo imeko yeChingaza National Park, ubuncwane bendalo obuseMpuma Cordillera kwingingqi yeAndes eColombia. Iintlobo ezinje ngeekhondomu, iibhere zeAndean kunye neentsila ezimhlophe ezinomsila zihlala apha.
Imimandla yeGlacial: Amaqondo obushushu angaphantsi kwe-6 ° C anamava apha. Yiyo imeko eSierra Nevada de Santa Marta, ekumantla eColombia kuNxweme lweCaribbean, apho unokuya khona ukonyuka intaba.
Amahlathi akweleenjiko: Ngamaqondo obushushu angaphezu kwama-27 ° C, amahlathi akweleenjiko afumile kwaye ashushu. Injalo imeko yonxweme lwePasifiki, iMagdalena kunye neCatatumbo basins kunye neAmazon, elona hlathi lityebileyo nelinezinto eziphilayo kwiplanethi apho ungonwabela indalo. Imvula ininzi unyaka wonke, iyinyanga ka-Matshi xa ifikelela kwelona xabiso liphezulu. Nangona kunjalo, ubuncinci bemvula bungena phakathi kukaJuni noSeptemba. Ke ngoko, ngenxa yemvula encinci, iinyanga zikaJulayi nezika-Agasti lelona xesha lilungileyo lokuya eAmazon.
I-steppe yetropikiIphawuleka ngemvula enqabileyo, amaqondo obushushu aphezulu kunye nohlaza olunqongopheleyo. Imizekelo emibini yintlango yaseCandelaria eBoyacá okanye eLa Guajira, ephawuleka ngeendunduma zayo ezinkulu zentlabathi kunye neendawo ezihlala kuyo entlango. Apha ungandwendwela i-ranchería ukuze ufumane inkcubeko yabantu baseWayuu.
Imozulu yaseSavannah: Ikhoyo e-Orinoquia, eBolívar, emantla e-Huila nakwiziko le-Cauca Valley. Ibonakala ngexesha lonyaka elomileyo nelineemvula, kunye notyani emadlelweni.
Imozulu yemvula efumileyo: Ikhoyo eCaquetá, eVaupés, kwinxalenye yeAntioquia naseCórdoba. Imvula esezantsi, ukwahluka kobushushu obuphezulu kunye notyani lwamahlathi oluncinci.
Leliphi elona xesha lilungileyo lokuya eColombia?
Elona xesha lilungileyo lokuya eColombia lixhomekeke kwingingqi ofuna ukuyindwendwela kwiholide yakho. Ilizwe linobuninzi beentlobo ezahlukeneyo ezithi ziguqulele kwiindidi ezahlukeneyo zomhlaba, indalo eyahlukeneyo kunye nemozulu.
Ngokomzekelo, Kwiingingqi zeAndes, elona xesha lilungileyo lokwazi le ndawo ziinyanga zikaJulayi nango-Agasti kuba ngeli xesha kukho amaqondo obushushu afudumeleyo kunye nemvula ezimbalwa., ezilungele ukuhamba. Ngeli xesha kuya kufuneka ufake iimpahla ezishushu kwityesi yakho (kuba iyaphola ukutshona kwelanga kwaye ebusuku kuyabanda). Kukwacetyiswa ukuba uzise i-sunscreen, kuba ukuphakama kwendawo kungenza ukuba utshise ngokulula nokuba iqondo lobushushu alikho phezulu kakhulu.
Ukuya kwizixeko ezikwiindawo ezingqonge iAmazon njengeLeticia, awona maxesha mahle ziinyanga zikaJulayi nango-Agasti kuba nangona kukho imvula, kushushu unyaka wonke kunxweme olusemantla wePasifiki. Ukuya kunxweme loMzantsi Pasifiki kwezi nyanga zezona zifanelekileyo. Kwakhona, ngoJuni nangoSeptemba kufanelekile ukutyelela le ndawo. Phakathi kukaDisemba no-Epreli lelona xesha lilungileyo lokundwendwela unxweme lweCaribbean.
Ukuba ufuna ukuya eColombia ukonwabela ukubonwa kweentyatyambo, kuya kufuneka uhambe ekuqaleni kwexesha lemvula kuba ekugqibeleni kunokubakho izikhukula kwezinye iindawo zelizwe. Ukwahluka yingingqi ejikeleze iBogotá kunye nonxweme lweCaribbean.
Kwangokunjalo, ngelixa ucwangcisa uhambo lwakho oluya eColombia kufuneka ukhumbule ukuba indawo ephezulu yelizwe oya kulo, kokukhona iya kubanda loo mihlaba. Umzekelo, iincopho zeentaba zigqunywe likhephu kubude obuziimitha ezingama-4.500 XNUMX. Ngalo lonke olu lwazi malunga nemozulu yaseColombia, uya kuba ukulungele ukuqala i-adventure yakho kweli lizwe lihle laseMzantsi Melika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imozulu yaseColombia
Ezona bhotwe zibalulekileyo eIndiya
Igqala likaHans Brinker